Emva kokuthola isipho noma ukuthenga orchid wakho wokuqala, novice umtshali ubona into yokuqala ephuma izimpande esitsheni - kubonakala sengathi ikhona imbali, ikakhulukazi uma sikhuluma a Phalaenopsis, Kuyaphuthuma ebhodweni entsha. Kodwa kungenzeka kabusha le ukuqhakaza orchid? Eqinisweni, it is hhayi Kunconywa, ngaphandle uma kuphakama isimo esiphuthumayo, ne izimpande nimkhiphela ebhodweni akuzona isizathu ukufakelwa.
Iqiniso liwukuthi orchid iningi izimpande zasemoyeni, okuyinto ungamunca umswakama kusukela emoyeni. Phela, ngokwemvelo orchid eziningi ezimila zemithi, izimpande ukunamathela Amashalofu okubeka amagxolo noma amagatsha. Ngakho ukuthi ungakwazi ukhule orchid ngaphandle phansi - obhasikidi noma amabhokisi - izingcezu ezinkulu ngokhuni. Izimpande ezinye zama-orchid kudingeka zome angabacwasi ngokushesha, futhi ukufinyelela emoyeni, ukuze ukufakelwa kuyadingeka ukuthatha leli ku-akhawunti.
Ukuqhakaza orchid uchitha amandla akhe ukuze silondoloze isimo sabo, abaningi ukuqhathanise ukukhulelwa. Ngakho ukuthi ukucindezeleka okuhlobene ne-ushintsho, lesi sitshalo cishe contraindicated. Uma kungekho sizathu ezinkulu, njengalezo omiswe noma abolile kohlelo impande, umbuzo ukuthi ukufakelwa futhi uma kunesidingo kungaba orchid ukuqhakaza, akukuhle ukuba sikucabange ngisho nokukucabanga.
Abalimi abaningi bathambekele ukucabanga ukuthi kunezinhlobo zama-orchid Phalaenopsis, kanye nezinye izinhlobo eziningi ukuthi abadinga Ukufakelwa kanye ngemva kweminyaka 2-3, noma ngisho kancane, lapho substrate nhlobo engena labhidlika futhi ubhujiswe. Yikuphi usuthandwa kakhulu eminyakeni yamuva, ama-orchid Vanda, intengo zazo kuyahlukahluka Kusukela kwabayizinkulungwane ezimbalwa, futhi ngazo zonke izindlela, ngaphandle substrate. Ngokuvamile kuqukethwe ingilazi isitsha sezimbali noma obhasikidi uyahlanganyela. Beginners orhievodam akusiyo ofanele kakhulu, ngoba idinga eyinkimbinkimbi ukuze silondoloze izimo: okusezingeni eliphezulu nomswakama, ukuchelela nsuku zonke noma ngezinye izikhathi ngisho eziningana ngosuku, sishaye. Ngakho isakhiwo anjalo esikhathini ukunakekelwa zalesi sihlahla kungcono ukuthatha i umtshali abanolwazi.
Ethandwa kakhulu okwamanje uhlobo Phalaenopsis orchid, ngoba ukubanakekela pretty elula: ukuchelela mayelana kanye ngesonto, hhayi kokukhulelwa njalo futhi, lula Imininingwane. Beginners namanje ngokuthi imibuzo eminingi, ngokwesibonelo, futhi ebusika, lesi sitshalo kungenziwa repotted Do? Ukuqhakaza orchid noma omunye kakade efihlekile kanye ukuqhakaza phalaenopsis ngokuvamile ebusika, ningathinti. Plant isimo ashwabene kakhulu akuvamile idinga ebusika "iqhubekele phambili." Ngokuvamile, ukufakelwa Kwenziwa entwasahlobo noma sekudlule isikhathi ebusika. Lokhu kwenziwa ngendlela elandelayo: udinga ukususa ngokucophelela isitshalo kusukela ebhodweni, ngomusa ukuxazulula izimpande, uma kunesidingo, usike ebolile elomile, afafaze tincetu isinamoni powder noma ngamalahle.
Okulandelayo, udinga ukuthatha imbiza - entsha uma isitshalo ubudala isivele ngokwanele. Kufanele kube sobala, njengoba izimpande Phalaenopsis ezihilelekile e-photosynthesis. Futhi, imbiza kufanele kahle umoya, okuyinto udinga ukukwenza izimbobo ezincane. Kumelwe siwubheke njengobaluleke substrate efanelekayo, futhi kungcono ukwenza kube ngokwakho. Lesi sitshalo Akumele zitshalwe ezweni noma kunjalo! Phalaenopsis etshalwa ingxube Peat, amagxolo sphagnum moss, Nokho, ungathatha nokuhlanza amagxolo. Bury simila akudingekile, ingxenye izimpande zesihlahla zingase futhi unamathele uvela imbiza. Obkladyvat uhlelo impande izitshalo phakathi ingxenyenamba izingcezu amagxolo ukuba uqaphele ilimaze lutho. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa kungcono hhayi nisela isitshalo, waqala ukuba izinqubo zokuwohloka.
Ngokunakekela efanele, Orchid kuyoba isikhathi eside kakhulu bathokozise umnini zawo zaziziningi futhi eside ukuqhakaza. Ukuba nakho okwengeziwe, Florist kalula ukuphendula imibuzo newbie mayelana nokuthi kungenzeka ukuba kabusha le ukuqhakaza ama-orchid.
Amathiphu ambalwa sendlela sikhule umango kusukela amathambo.
Ukusetshenziswa isitashi abasemikhayeni
Red iso shadow: indlela yokusebenzisa ubuhle-mkhuba
Isiphuzo esiphundu sesaladi isaladi